अकालमै गुम्यो छोरो, काजकिरियामा बुवाआमाकाे विवाद – Saurahaonline.com
धनु भुसाल, नवलपुर : गत माघ ७ गते हुप्सेकोट गाउँपालिकाे गाडीले ठक्कर दिँदा एक बालकको मृत्यु भएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिएको छ । ग १ ज ३८०९ नम्बरको जिपले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएका बालकका पीडित परिवारले यस्ताे गुनासो गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष स्वतन्त्र कोपिला मल्ललाई घरमा छोडेर फर्कने क्रममा भएको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका बालकका आमाबुवाले यस्तो दुखेसो गरेका हुन् । दुर्घटनामा ४ वर्षीय दीप गाहा मगरको मृत्यु भएको थियो भने अन्य ३ जना घाईते भएका थिए ।
छोराको मृत्युको खबर पाएको सातादिनपछि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मलेसियामा रहेका मनबहादुर गाहा घर फर्किए। छोराको दुर्घटनापछि श्रीमतिसँग दु:खसमेत साट्न नपाएका उनी यतिबेला आफ्नो दिवंगत छोराको मृत आत्माआथि केही व्यक्तिले राजनीति गरिरहेको देख्दा थप पीडित बनेका छन्। एकातिर अकालमै छोरा गुमाउनुको पीडा त अर्कोतिर संसार छोडिसकेको छोरामाथिको राजनीति, मनबहादुर माथि पीडामाथि पीडा थपिएकाे छ ।
आफुले दुर्घटनामा छोराको मृत्युबारे घटनाको भोलिपल्ट मात्रै थाह पाएको बताउने मनबहादुर २० दिनको छुट्टि मिलाएर घर आएका हुन् । छोराको मृत्युलाई लिएर मानिसहरुले कसैले केही त कसैले केही भनिरहने हुनाले उनले अहिलेसम्म श्रीमती मिना गाहासँंग बसेर सामान्य कुराकानी समेत गर्ने वातावरण बनेन ।
छोरा दुर्घटनामा परेको ठाउँमा हेर्नसमेत जान मन नलागेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “श्रीमतीलाई कावासोती आउ, सँगै बसाैं, हाम्रो घरको कुरा हामी नै मिलेर अघि बढौं भन्दा मानिनन्, अहिले उनी हुप्सेकोटमा दिदीको घरमा बस्छिन् । कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा हुन्छ तर राम्रोसँग कुरा हुन पाएको छैन् । कहिले दिदी त कहिले को /को हुन् ? आफन्तले फोनमा कुरा गर्दागर्दै थुतेर बोलिदिने, पछाडिबाट बोल्न सिकाएका कुरा मात्रै बोल्ने त कहिले कुरा गर्नै नदिने गरिरहन्छन् ।’रुचाङ नगरडाँडाका स्थायी बासिन्दा गाहाकी श्रीमती छोरालाई पढाउन हुप्सेकोट ४ मा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी थिइन् ।
‘घटना घटिसक्यो, अब मेरो छोरा फर्किएर आउँदैन, मैले आफ्नो छोराको लाससमेत जलाउन नपाउने कस्तो राजनीति हो यो ? बुझ्नै सकेको छैन’ उनले भने । ‘दुर्घटना भएको गाउँपालिकाको गाडीका चालक फरार छन्, प्रहरीमा जाहेरी दिएको छु, दोषिलाई खोजेर कारबाही गर्ने प्रहरी प्रशासनले हो । मैले छोराको लास माथिको राजनीति सहन सकिन श्रीमतीलाई दाहसंस्कार गर्नुपर्छ आउ भनें तर आइनन् । आफन्तको सहयोगमा १८ औं दिनको दिनमा दाहसंस्कार र काजकिरिया सकाएँ । छोराको लास कुहिएको देख्न नसकेर श्रीमतीले नमान्दा पनि दाहसंस्कार गरेको हुँ,’ मन बहादुरले भने ।
उता मृतक बालककी आमा मिनाले भने दोषीलाई कारबाही नभएसम्म दाहसंस्कार नगर्ने भनेपनि श्रीमानले नमानेको बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘विदेशमा रहँदै छोराको मृत्युको खबर दिँदा सान्त्वना दिँदै नआत्तिनु म आउँछु, दोषिलाई कारबाही गरौंला भन्नुभयो तर नेपाल आएपछि सल्लाह गराैं, हामी मिल्नुपर्छ मात्रै भन्नुहुन्छ ।’ ‘आफ्नै काखमा हेर्दाहेर्दै छोराको मृत्यु देख्नुपरेको छ, जसको लापरबाहीले छोरा गुम्यो, त्यसलाई कारबाही नभएसम्म मलाई शान्ती मिल्दैन, त्यसैले अब म के कुरामा मिल्नु’, उनले भनिन् ।
मृतक बालकका हजुरबुबा रुद्र बहादुर गाहले आफूहरु दु:खमा रहेको पीडित भएकोले दुखमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘नहुने घटना घट्यो अब दोषिलाई कारबाही हुनुपर्छ, हामीलाई न्याय र क्षतीपूर्ती चाहिन्छ, तर हाम्रो पीडामाथि राजनीति गरेर घाउमा नुन छर्किने काम भइरहेको छ । ‘छोरा विदेशबाट आयो, सबै मिलेर नातीको पोष्टर्माटम गरेर दाहसंस्कार ग-र्यौं तर बुहारी आइनन्, साह्रै दुःख लागेको छ’, उनले भने । आफ्नी बुहारीलाई छोरासँग केही स्थानीयले भेट्नसमेत नदिएको रुद्र बहादुरको दुखेसो छ ।
मनबहादुर र मिनाको ५ वर्षअघि प्रेम विवाह भएको थियो । मनबहादुर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया बस्दै आएका थिए ।
उता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले आफू गाउँपालिकामा नभएको समयमा घटना घटेको बताउँदै आफू प्रमुख भएकाले घटना घटाउनेलाई कारबाही र पीडितलाई राहत दिलाउन तयार रहेको बताएकी छन् । गत माघ २४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैैठकले दोषिलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने, मृतकका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने तथा घाईतेको उपचार खर्च एवं क्षतीपूर्तीमा सहयोग गर्ने मृतक बालककी आमाको योग्यता अनुसारको जागिर बन्दोबस्त गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र कारबाही गरिनुपर्ने बताएकी छन् । प्रहरी प्रशासनलाई दोषीको सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराएर खोजीकार्यमा सहयोग भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यामले घटनालाई थप अतिरञ्जित गर्ने काम गरिरहेको पाण्डेको भनाई छ ।
पाण्डेले पीडित परिवारसँग बसेर उनीहरुको कुरा सुन्ने सहज वातावरण नबनेको र फरार रहेका गाडी चालक शिव सुवेदी गाउँपालिकाको सम्पर्कमा नआएको बताएकी छन् । यद्दपी अनुसन्धानमा सहजताका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सुचना उपलब्ध गराइएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । भन्छिन, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा म सधैं तयार छु ।’